China Plastic Syringe jekiseni Kuumbwa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Kugadzira chakuvhuvhu uye jekiseni kuumbwa kwepurasitiki
Mapurasitiki epurasitiki ndiwo mashandisirwo anoitwa munzvimbo zhinji, senge kurapwa, maindasitiri, zvekurima, kuyedzwa kwesainzi uye nezvimwe. Iyo sirinji yakareba uye yakaonda, uye kukwana pakati pesirinji neplunger kunoda kutanha kwemhepo kwakanaka, Iyo sirinji yakareba uye mutete, uye kukodzera pakati pesirinji neplunger zvinoda kukakama kwemhepo, saka ine zvido zvakakosha mukugadzira uye jekiseni kuumba maitiro.
Sirinji itubhu ine kamwene ne pisitoni kana girobhu rekuyamwa nekuburitsa zvinwiwa mune zvinoyerera, zvekuchenesa maronda kana maburi, kana neine tsono isina kubaya yekubaya kana kubvisa mvura.
Majekiseni ekutanga aigadzirwa negirazi, ayo aidhura kugadzira, asina kusimba uye anotakurika. Kuonekwa kwesirinji yepurasitiki inoraswa, iri nyore kugadzira, mutengo wakaderera uye nyore kutakura, inodzivirira njodzi yekutapukirwa nehutachiona uye inobatsira zvikuru vanachiremba nevarwere.
Iyo sirinji dhiramu inogadzirwa nepurasitiki kana girazi, kazhinji riine chiyero chinoratidza huwandu hwemvura irimo mujekiseni, uye inogara iri pachena nguva dzose. Magirazi ejirasi egirazi anogona kutapiswa muacoclave. Nekudaro, majekiseni mazhinji emazuva ano ekurapa mapiritsi epurasitiki ane mapuroni erabha nekuda kwekuvharwa kuri nani kwazvo pakati pepistoni nedhiramu, uye anodhura uye anogona kuraswa kamwe chete.
Iko kushandiswa kwepurasitiki majekiseni
Mukurapa, majekiseni anoshandiswa kujowa zvinodhaka mukati meganda, tsinga dzeropa kana maronda evarwere, kana kubvisa ropa kana mvura yemumuviri kubva kuvarwere kuitira kuongororwa kwerabhoritari.
Mapiritsi epurasitiki anoshandiswa mukurapa
Majekiseni ekurapa dzimwe nguva anoshandiswa pasina tsono yekumwisa nemumuromo mishonga yemvura kune vana vadiki kana mhuka, kana mukaka kune mhuka diki diki, nekuti muyero unogona kuyerwa nenzira kwayo uye zvakareruka kukwenya mushonga mumuromo wenyaya pane kunyengerera nyaya kunwa kubva mupuni yekuyera.
Kunze kwekushandisa mukurapa, majekiseni anogona kushandiswa mune zvimwe zvinangwa zvakawanda. Semuyenzaniso:
* Kuzadza inki cartridges neingi mumatsime matsime.
* Kuwedzera reagents emvura murabhoritari
* Kuwedzera guruu panobatanidzwa zvikamu zviviri
* Kudyisa mafuta ekuzora kumushini
* Kuti ubudise mvura
Mapiritsi epurasitiki anoshandiswa mumaindasitiri uye murabhoritari
Muviri wesirinji unonyanya kuve nezvikamu zviviri: purasitiki plunger, dhiramu repurasitiki. Yakareba uye yakatwasuka. Kuti uve nechokwadi chekuvharika, hupamhi hwechikamu chemukati chegomba retsono yese inowanzo chengetwa padanho pasina kudhirowa kona, uye deformation haitenderwe. Saka jekiseni chakuvhuvhu uye kuumbwa kwemapurasitiki emabhureni zvinogara zvichida hunyanzvi uye hunyanzvi.
Mestech inogona kugadzira jekiseni kuumbwa uye jekiseni kugadzirwa kwemarudzi akasiyana siyana epurasitiki sirinji zvikamu. Tinotarisira kukupa iwe nekugadzirisa masevhisi munzvimbo ino.Ndapota taura nesu.
Pashure: Chii chinonzi plastiki bhokisi rekurapa
Zvadaro: Kugadzira kwepurasitiki sirinji